हङकङको दैनिक पत्रिका ‘एप्पल डेली’ बन्द, १० लाख प्रति बिक्यो अन्तिम अंक! « News24 : Premium News Channel
हङकङको दैनिक पत्रिका ‘एप्पल डेली’ बन्द, १० लाख प्रति बिक्यो अन्तिम अंक!
एजेन्सी । हङकङको दैनिक पत्रिका ‘एप्पल डेली’ बन्द भएको छ । लोकतान्त्रिक धारको पत्रिकाको कार्यालयमै प्रहरी घुसेर मालिक र सम्पादकलाई विभिन्न यातना दिन थालेपछि ‘एप्पल डेली’ विहीबार (आज)देखि बन्द गरिएको हो ।
बन्द घोषणापश्चात् ‘एप्पल डेली’को अन्तिम अंक किन्नेहरुको आज बिहानैदेखि भीड लागेको थियो, जहाँ बिहान ८ बजेसम्ममा १० लाख प्रति बिकेको बताइएको छ । ‘एप्पल डेली’ ८० हजार प्रति दैनिक बिक्ने गरेको थियो । तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दिन १० लाख प्रति बिकेको बीबीसीले जनाएको छ ।
चीनले ‘एप्पल डेली’का मालिकमाथि झुटा आरोप लगाउनुका साथै गिरफ्तार गरिएको छ, भने उनका सबै सम्पत्ति समेत जफत गरेको छ । हङकङ प्रहरीले एप्पल डेलीको २३ लाख डलर सम्पत्ति फ्रिज गरेको छ ।
गत साता मात्रै पाँच जना शीर्ष सम्पादक र कार्यकारीलाई गिरफ्तार गरेपछि प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो पत्रिका बन्द गर्न दबाब दिनुलाई लोकतन्त्रबादीहरुले हङकङ सरकारको अत्यन्तै खराब कदम भएको बताएका छन् । त्यसोत, धेरै अघिदेखिनै यस पत्रिकामाथि चीन सरकारले आँखा लगाइसकेको बताइएको छ ।
यस पत्रिकाले सरकारी नियन्त्रणको सँधै विरोध जनाउँदै आएको थियो । लोकतन्त्रवादी धारको पत्रिका बन्द गर्न बाध्य पारिएको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।